Durian, voankazo maimbo indrindra eto an-tany. Fa maninona no maimbo? | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | gastronomy, Fitsangatsanganana any Azia
Ny voankazo dia sakafo iray izay tsy azo ihodivirana amin'ny sakafon'olona rehetra eto an-tany. Ny voankazo rehetra dia misy otrikaina sy vitamina ilaintsika amin'ny fahasalamantsika ary hihinantsika azy, hendry ny natiora ary nifantoka tamin'ny fanaovana ireo sakafo ireo ho tsara tarehy ivelany sy anatiny, noho izany dia manintona antsika izy ireo ary mihinana azy ireny amin'ny tsiro isika. .. handray soa avy amin'ny otrikaina rehetra. Saingy ny natiora dia nanadino ny fanaovana ny iray amin'ireo voankazo rehetra ho manintona, ny tiako holazaina dia Durian, voankazo maimbo indrindra eto an-tany.
Raha maimbo ny voankazo iray, ny zavatra farany tadiavin'ny olona dia ny fihinana azy, tsy te hanana azy eo akaikintsika akory isika!! Sakafo maimbo na ratsy tarehy Tsy ho afaka hihinana azy isika, satria ny toe-tsaintsika dia hilaza amintsika fa mampidi-doza amin'ny fahasalamantsika izany ary mety hampidi-doza antsika.
1 Durian eny an-tsenan'i Bangkok
2 Ahoana no mampiavaka an'io voankazo io?
3 Traikefa miaraka amin'ny durian
4 Amin'ny toerana sasany dia voarara
5 Fitiavana sy fankahalana amin'ny voankazo
6 Fa maninona no maimbo be
7 Fihetseham-po sasany momba ny durian
7.1 Ny fihetsiky ny ankizy
7.2 Tovovavy tia
Durian eny an-tsenan'i Bangkok
Raha efa namakivaky ianao tsena sasany any Bangkok, Kuala Lumpur na Singapore (ankoatry ny tanàna hafa), ary hitanao fa misy fofona biby maty (na dia misy milaza aza fa maimbo kokoa ny fofon'izy ireo), azo antoka fa nandalo teo akaikin'ny toeram-pivarotana voankazo iray izay amidin'izy ireo ilay durian malaza. Tena malaza ratsy amin'ireo mpizahatany tsy misy ahiahy izay sahy nanandrana azy io, satria fantatra manerana an'i Azia atsimo atsinanana amin'ny maha mpanjaka ny voankazo azy io.
Ahoana no mampiavaka an'io voankazo io?
Ny sasany dia mamaritra azy toy izao: 'Toy ny mihinana crème vanille ao anaty lavarangana izy io, ary ny fofony dia azo faritana ho fofon-kisoa, verinia ary tongolo, afangaro amin'ny ba kiraro be hatsembohana avokoa.'
Durian dia maniry amin'ny hazo fantatra amin'ny anarana hoe Durium ary hita manerana an'i Azia atsimo atsinanana. na dia voankazo naterak'i Indonezia, Malezia ary Brunei aza. Voankazo mora ekena izy io, tsy noho ny fofony mahery fotsiny, fa noho ny fisehoany koa. Manana habe be (hatramin'ny 30cm ny halavany), manana endrika lava na boribory izy ary rakotry ny tsilo. Raha ny marina, ny anarany dia avy amin'ny "duri" Malay, izay midika hoe tsilo. Ny pulp an'ny durian dia miloko mena sy mavo-volomboasary, miaraka amin'ny tsiro mamy, na dia fofona sarotra zakaina aza.
Ny olona te hihinana azy dia tsy maintsy manao izany miaina ny fofonainy satria tsy zakan'ny sasany ny maimbo.
Traikefa miaraka amin'ny durian
Ny mpiara-miasa amin'ity asa soratra ity dia nanana traikefa amin'ity voankazo hafahafa ity ary mamaritra izany toy izao:
“Ny zavatra niainako voalohany tamin'ny durian dia tao amin'ny tsena tao amin'ny faritra Hindu any Singapore. Nanatona toeram-pivarotana iray nivarotra azy aho, ary nanolotra sombin-tsakafo ho ahy ilay mpivarotra. Ny zavatra mahatsikaiky dia ilay nilaza fa ny mpivarotra dia naneho fitsikiana saro-pantarina rehefa nanolotra ahy ny voankazo izy, azo antoka fa fantany izay ho fihetsiko rehefa manandrana izany. Mila milaza aminao aho fa raha mahazaka ny fofon'ny durian ianao dia mamy tokoa ny tsiro. "
Azoko antoka fa olona maro izay mivarotra an'io voankazo io ary zatra ny fofony no hihomehy ny fihetsiky ny olon-kafa rehefa miatrika an'io voankazo io izy voalohany.
Amin'ny toerana sasany dia voarara
Mahery tokoa ny fofony ka voarara izany amin'ny seranam-piaramanidina maro, hotely ary fitateram-bahoaka, manerana an'i Azia atsimo atsinanana rehetra. Tsy isalasalana fa traikefa tsy manam-paharoa izay tsy azonao adino, satria raha vao maheno ny duriananao voalohany ianao dia tadidinao foana.
Fitiavana sy fankahalana amin'ny voankazo
Ity voankazo ity, na dia simba sy tsy misokatra aza ny hodiny, dia misy fofona mavesatra be ka tsy zakan'ny olona maro izany. Azonao atao ny manimbolo azy avy lavitra. Fa kosa, misy olom-bitsy vitsy an'isa tia ny fofona sy ny tsiron'ny voankazo. Toa ny voany dia mety hampitombo fitiavana amin'ny olona sasany nefa fankahalana fatratra ny hafa.
Misy ny olona mihinana ny atin'ny voankazo manta, fa misy koa ireo tia mihinana azy masaka. Ny atin'ny durian dia azo ampiasaina hanatsarana lovia maro any Azia atsimo atsinanana, ary ampiasaina hanamboarana zava-mamy nentim-paharazana mihitsy aza.
Misy ihany koa ny olona mahatsapa fanoloran-tena lehibe amin'io voankazo io satria ampiasaina amin'ny fanafody nentin-drazana aziatika koa izy io, satria izy io dia anti-inflammatoire, mampihena ny tazo ary na dia aphrodisiac mahery aza.
Fa maninona no maimbo be
Maimbo be io voankazo io satria mifangaro akora simika isan-karazany no mahatonga azy mamokatra io fofona mahery io. Ny fitambarana dia miavaka amin'ny endrika simika tena samihafa samy izy (misy eo amin'ny 50 ny fitambaran'ny simika).
Mahaliana fa tsy misy ny fitambaran-javatra simika tsirairay avy toa misy ifandraisany amin'io voankazo io, fa eo anelanelan'izy rehetra ireo dia mampifangaro fofona samihafa. ary ataovy maharikoriko. Ny fofona vokariny dia eo anelanelan'ny vaovao, voankazo, metaly, may, tongolo natsatsika, fromazy manga, tongolo lay, tantely ... ary ny olona manimbolo azy dia manampy zavatra hafa arakaraka ny fahitan'ny tsirairay azy.
Izany rehetra izany dia mahatonga ny olona hahatsapa tena fanoloran-tena amin'ity voankazo ity, na ny mifanohitra amin'izay ... mahatsapa ho voahilikilika izy ireo ary tsy afaka manakaiky akory.
Fihetseham-po sasany momba ny durian
Ny fihetsiky ny ankizy
Amin'ity horonantsary voalohany napetrako taminao ity noho ny fantsom-pahitalavitra REACT YouTube dia ho hitanao amin'ny teny Anglisy izany, saingy tsy ilaina ny hahafantaranao ity fiteny ity hahafantarana ny fihetsika nasehon'izy ireo tamin'ity voankazo ity satria hoy ny endrik'izy ireo sy ny fihetsik'izy ireo. izany rehetra izany. Nataoko voalohany ity horonantsary ity satria ny ankizy no tso-po indrindra azonao jerena amin'izy ireo ny tena misy an'io voankazo hafahafa io.
Amin'ity horonantsary faharoa ity dia tiako haseho anao ny fihetsiky ny tovovavy iray izay tena tia durian ary mankafy ny endriny sy ny fofony ary ny tsirony ... tena toa voankazo manaitaitra izy ioOhatrinona no tianao mitovy aminy? Nahita izany aho tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube AnaVegana.
Mieritreritra ve ianao fa tena maniry an'io voankazo io sa hahatsapa lolompo amin'izany? Efa nanandrana izany ve ianao? Lazao anay ny zavatra niainanao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Durian, voankazo maimbo indrindra eto an-tany
Tsy azoko ny fihetsiky ny olona, ​​raha hatramin'ny voalohany dia misy fofona mahatsiravina izy io, fa tsy tsiro tsy mahafinaritra, satria ny "réaction" dia miseho rehefa mihinana vaovao?
Ilay mpandinika ny manga dia hoy izy:
Tiako ny voankazo rehetra ary raha hafakely na tena tsy dia fahita firy io dia haiko fa raha manolotra durian ho ahy izy ireo dia hanaiky hihinana azy aho nefa tsy miraharaha izay maimbo izay mety ho lehibe
Mamaly an'i The Manga Chronicler
Loreto dia hoy izy:
Manontany tena ihany aho fa. Angamba mivoaka ny fofona rehefa manaikitra amin'ny voankazo. Tsy haiko.
Valio i Loreto
Nividy tany amin'ny fivarotana sakafo atsinanana, vatomamy vita tamin'ity voankazo ity aho, ary tena nahafinaritra tokoa, na dia hanaiky aza aho fa mandà ny hanoroka ahy ny vadiko raha efa nihinana an'iny pilina segondra iny aho hahahahahahaha ... ... ny mamy mbola matsiro.
Tiako ny lahatsoratrao! Misaotra anao
Jolin Tsy azoko ny zavatra nataoko tany Thailand nandritra ny iray volana ary mihinana an'io voankazo io isan'andro aho satria tiako ilay izy, tena mahafinaritra ny fofony ary mahery ny fofony nefa tsy mamofona na fofona na zavatra lazainao… .. Tsy misy azoko…. ny toy izany koa dia amin'izao faran'ny taona izao, ny durian dia mamofona toy ny inona izy io, voankazo ary mahafinaritra ary tsara vintana aho….
tendan-kanina dia hoy izy:
Mahafinaritra !!. Isaky ny mankany Asia atsimo atsinanana aho dia mankafy azy amin'ny fahafinaretana lehibe (vlr). Ny lafy ratsy dia any amin'ny fivarotana amoron-dalana ihany no anaovana azy, noho ny antony mazava. Tamin'ny fotoana voalohany nahatongavako tany Malezia sy nividy dia napetrako tao amin'ny hotely ary tsy nody ny fofona mandra-pialanay. Hitanay taty aoriana fa voarara ny fitondrana azy any amin'ny hotely.
Mamaly an'i gloton
Tena manaja izay tia azy aho… saingy nanandrana izany aho rehefa nankany Thailandy ary tamin'ny manaikitra voalohany dia tsy maintsy milaza aho fa nanome ahy gag izay saika naloako…. Manana "tsiro" tena hafahafa izy mahita fa sarotra ny mpizahatany (ankoatry ny fofona maharikoriko, izay miharihary, ary tsy misy olona afaka mandà azy) ... na dia misy aza ny olona mahita azy matsiro, ho an'ny tsiro, misy loko! !
Francisco Mendez dia hoy izy:
Sarotra amiko ny hino fa misy olona nanandrana durian tena nilaza fa matsiro. Mahatsiravina ny fofony ary ratsy kokoa noho ny fofony.
Valiny tamin'i Francisco Méndez
Na dia mitovy aza ny endrik'izy ireo, ity nangka avy any Nayarit ity dia matsiro be, tsy mamofona ary mihinana azy any Monterrey, Mexico aho
Diogenes. dia hoy izy:
Raha ny marina dia tsy aziatika aho ary tsy nandeha nankany Azia, ity voankazo ity tamin'ny fahazazako dia nanomana ahy ny renibeko indraindray izay antsoinay hoe «shampooing, tsy hitako intsony satria tany amin'ny Repoblika Dominikanina dia tsy tena mahazatra na Ity voankazo ity dia malaza any amin'ny taniko antsointsika hoe mino aho fa «Jaca: amiko manokana ary indrindra rehefa masaka tsara ny voankazo dia tiako ny fofony ary tsy misy ifandraisany amin'ny tongolo na diky mihitsy, manaja ny hevitra fa heveriko fa ny hevitra dia mitaona foana ny olona manolotra azy.
Ankafiziko ny fofony ary matetika ny tsirony dia toy ny chiclet frezy ary toy ny akondro izy io. Miteraka resabe ny voankazo noho ny fofony sy ny habeny ary ny tsirony, izany ihany no fahamarinana ekeko.
Tiako ity voankazo ity ary tiako ny mihinana azy ireo, be dia be rehefa manandrana eny ivelan'ny trano eny ivelany aho hijery ny lanitra sy hidera an'Andriamanitro noho ny namoronany an'ity voankazo ity tena tsara ka maro ny beces rehefa nihinana azy io. fihomehezana sy fahasambarana lehibe ho ahy.
Isaorana ny Andriamanitro noho io voankazo io fa, miaraka amin'ny mananasy, voankazo mahasosotra sy soursop no tiako indrindra hatramin'ny fahazazako.
Valiny ho an'i Diogenes.
Ny zava-mitranga dia tsy mitovy amin'ny Durián ny Jaca na dia avy amin'ny sokajy iray ihany aza izy ireo. Jaca kosa dia mamy sy maimbo. Raha ny fahitako azy dia maro no mampisafotofoto ireo voankazo roa ireo ary izany no antony nilazan'izy ireo fa matsiro izany raha tsy Durian ny tena efa nanandramany fa karazana hafa.
Tsidiho ny Rock of Gibraltar
Torolàlana haingana handefasana valizy amin'ny fiaramanidina